SysMonTask: Nidaam Nidaam wax ku ool ah oo iswaafajiya oo ku saabsan GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
SysMonTask: Nidaam Nidaam wax ku ool ah oo iswaafajin ah oo loogu talagalay GNU / Linux
Sida lagu yiri munaasabadaha kale, mid ka mid ah waxyaabaha sida weyn loogu riyaaqay Isticmaalayaasha GNU / Linux iyaga ku saabsan Nidaamyada hawlgalka oo bilaash ah oo furanmarka laga reebo awoodeeda wanaagsan ee ay shakhsi ahaaneed, weyn la qabsiga kombiyuutarada ilaha hooseeya iyo noocyo kala duwan ee codsiyada iyo qalabka softiweer, waa adiga fudeyd iyo waxqabad si loo maareeyo ilaha iyo adeegyada la fuliyay.
Taas awgeed, wax badan oo loogu talagalay Console (CLI) sida Desktop (GUI), waxaa jira noocyo kala duwan oo barnaamijyo ama yutiilit ah oo horeyba loogu dhex daray noocyada kala duwan Deegaanka Desktop (DE) o Maareeyayaasha Daaqadda (WM), si loola socdo ama loo maareeyo, kheyraadka qalabka iyo adeegyada ama barnaamijyada kale ee la raro. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira codsiyo kale oo aad u faa'iido badan oo dibedda iyo madaxbannaan, sida "SysMonTask".
Mid la mid ah "SysMonTask" oo aan horay uga soo hadalnay waa "QPS". Kuwaas oo aan ku muujineyno waxyaabaha soo socda:
"QPS waxay aad ugu egtahay HTOP, laakiin aad ayey ufududtahay adeegsiga iyadoo haysata isdhexgalka muuqaalka iyo awood u lahaanshaha wax walba adigoo gujinaya. QPS ma laha xulashooyin badan, sidaa darteed waa inaan kaliya dooranaa waqtiga ay cusbooneysiineyso macluumaadka, qiyamka aan dooneyno inaan aragno iyo wixii la mid ah. Intaas waxaa sii dheer, geeddi-socod kasta, ama magaca hawsha, waxay na siinaysaa jibbaar ahaan tirada xargaha ay fulinayso."
Mid kale oo xoogaa ka horumarsan, oo sidaas darteed, ka duwan waa "Stacer" kuwaas oo aan ku muujineyno waxyaabaha soo socda:
"Stacer es waa il furan nidaam kumbuyuutar kumbuyuutar sameeye iyo kormeer codsi oo ka caawiya dadka isticmaala inay maareeyaan nidaamka oo dhan dhinacyo kala duwan, waa adeeg dhan-in-one. Intaa waxaa sii dheer, awood noo siin kara inaan aragno astaamaha kombuyuutarkeena, aan ku sameyno dayactir iyo sidaas darteed, hagaajinta Nidaamkeenna Distro ama Linux, marka lagu daro kormeerka (abaabulka iyo xaqiijinta) adeegyada iyo barnaamijyada ku dul socda, xitaa gaarsiinta awoodo inaad tirtirto xirmooyinka haddii aan kuu sheegno."
1 SysMonTask: Nidaamka Monitor wuxuu la mid yahay Windows
1.1 Waa maxay SysMonTask?
1.2 Soo dejiso, rakibo, isticmaal iyo shaashadda shaashadda
SysMonTask: Nidaamka Monitor wuxuu la mid yahay Windows
Waa maxay SysMonTask?
Sidaad sheegtay bogga rasmiga ah ee GitHub, waxaa lagu tilmaamay sida soo socota:
"Codsiga Nidaamyada 'Linux Systems Monitor' oo leh isukeenid iyo utility ee maareeyaha hawsha Windows si loogu oggolaado xakameyn iyo kormeer ballaaran."
Dhexdeeda waxay ku darayaan, "SysMonTask" isagaa iska leh nooca xasilloon ee ugu dambeeyay, lambar 1.3.9. Kaas oo la socda kuwa soo socda wararka:
Qalabka GPU-ga ee khaladaadka dhimashada.
Wadahadal shaandheyn la hagaajiyay
Nidaaminta qorista nidaamka iyo jaantuska jaantuska.
Ka mid noqoshada tabka hawsha wada socda ee dhammaan.
Halka qaar ka mid ah muuqaalada ugu muhiimsan Waxay yihiin:
Sawirro lagu kormeerayo ilaha CPU, Memory, Disk iyo Network.
Tirakoobka CPU, Memory, Disk, Adapters Network iyo isticmaalka shaqsiga Nvidia GPU
Liiska diskiyada lagu rakibay nidaamka
Liiska habsami u socodka nidaamka.
Intaa waxaa dheer, u ekaanshihiisa weyn ee ah Windows Task Monitor, in qaarkood ay jeclaan karaan ama aysan jeclaan, keenaan a mawduuc mugdi ah, oo wuxuu ku bilaabmayaa mawduuca ugu dambeeya ee aad dejisay.
In kastoo "SysMonTask" Waxaa lagu rakibi karaa dhowr siyaabood ama qaab, sida lagu arkay kuwa soo socda isku xirkaHada, abka kaliya ayaa looxirmay Ubuntu 18.04, 20.04 iyo 20.10; iyo waxyaabaha ay ka soo farcameen sida Linux Mint iyo ElementaryOSama GNU / Linux Distros socon sida Debian iyo MX Linux.
Xaaladdeenna wax ku oolka ah, sida caadiga ah waxaan u isticmaali doonnaa a MX Linux respin loo yaqaan Mucjisooyinka oo leh a Mawduuca muuqaalka Hacker si loo siiyo wax yar oo ka sii weyn.
Marka hore waxaan soo dejisanaa faylka ".deb" loo yaqaan «sysmontask_1.3.9-ubuntu20.10_all.deb». Kadibna waxaan ku rakibnaa amarka soo socda ee soo socda:
Ka dib markii si guul leh loo rakibo waxaan sii wadi doonnaa inaan ku fulino iyada oo loo marayo Liiska Codsiyada isaga ku raadinaya magaciisa "SysMonTask". Sida aan hoos ku arki doono:
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan "SysMonTask", waxaad ku booqan kartaa boggooda internetka LaunchPad.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «SysMonTask», yar app la socodka hawsha, horumarsan, faa'iido leh oo saaxiibtinimo, iyada oo ay ugu wacan tahay isku mid ahaanta Windows Task Monitor, oo loo isticmaali karo dhowr nooc Deegaanka Desktop (DE) y Maareeyayaasha Daaqadda (WM), si loo wanaajiyo maareynta ilaha iyo geeddi socodka GNU / Linux; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » SysMonTask: Nidaam Nidaam wax ku ool ah oo iswaafajin ah oo loogu talagalay GNU / Linux
AOS-P5: Sahaminta isha weyn ee sii kordheysa ee Apple Open - Qeybta 5